Kooxda Fiorantina Oo Ceyrisay Tababaraheeda Kadib Markii Uu La Dagaalay Ciyaaryahanka Ka Tirsan Kooxda
Kooxda Fiorantina oo ceyrisay Tababaraheeda kadib markii uu la dagaalay Ciyaaryahanka ka tirsan Fiorantina iyo xilligan oo horyaalka Talyaaniga uu noqday markii ugu badneyd Tababarayaal la ceyriyo.
Tababarihii kooxda Fiorantina Delio Rossi ayaa la ceyriyay kadib markii uu weeraray mid kamid ah ciyaaryahankada kooxdaas ciyaartii dhexmaraysay Fiorantina iyo Novara.
Macalinkii kooxda la Viola Delio Rossi ayaa weeraray weeraryaahnka wadanka Serbia iyo kooxdiisa oo uu feeray kadib markii xidigaas laga soo saaray garoonka oo ciyaaryahan kale lagu badalay kuna sacbiyay oo ku candhuufay tababaraha.
Ciyaaryahankii hore ee kooxda Manchester utd Adem Ljajic ayaa si dandansi ah ugu sacbo tumay Tababarihiisa kadibna Delio Rossi uu qaatay go’aan ah inuu si toos ah u weeraro ciyaaryahankaas.
Shilkaan ayaa dhacay kulankii xalay kooxda Fiorantina ay 2-2 la gashay kooxda Novaro kulan ka tirsanaa Serie A iyadoo kooxda Gudoomiyaha kooxda Fiorantina Andrea Della Valle ayaa ceyriyay Tababarahaan kadib markii uu ku dhaqaaqay arintaas isagoo sheegay inay tahay wax aan loo dulqaadan Karin gardarada iyo aqlaaq xumida uu ku dhaqaaqay Tababarahaas.
“waxaa sameeyay Go’aan gardaradana ma lahan marmarsiiyo ayuu yiri Gudoomiyaha kooxda Fiorantina Della Vale.
Wuxuu intaas ku daray Gudoomiye Della Vale inuu ka xunyahay in Macalin uu falkaas ku kaco waa qof wanaagsan Macalinka laakin uma qalmo inuu sameeyo wixii dhacay caawa waana fal aan wanaagsanayn oo xun.
Arrintaan ayaa dhacday wax yar kadib markii kooxda Fioranina lagu hogaaminayay 2-0 laakin ay kadaba timid oo ay ka dhigtay 2-2.
Tababare Rossi ayaa lix bilood kaliya ahaa macalinka Fioantina kadib markii horey looga ceyriyay Sinisi Mihalavic bishii November.
Kooxdan Fiorantina aya ku jirta kaalimta 15-aad horyaalka Talyaaniga wuxuuna noqonayaa tababare Dela Rossi tababarihii 19-aad ee xilkiisa waaya oo laga ceyriya horyaalka Talyaaniga xilligaan waana markii ugu badneed taariikhda waxaana xiligii 1951-1952 uu ahaa xiligii ugu badnaa ee tababare la ceyriyo waxaana la ceyriyay xiligaas 15 Macalin.
Muqdisho-Somalia.	Latest News